ဤသုံးမျိုး (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ဤသုံးမျိုး (၁)
Posted by thit min on Dec 6, 2011 in Business & Economics, Community & Society, Jobs & Careers, Society & Lifestyle | 29 comments
စားစရာ၊ဝတ်စရာ၊အိမ် (Food, Clothing and Shelter) ပေါ့။
(Basic Human Needs- BHNs )လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျနော်ခုတလော (Cost and Benefit) စရိတ်နဲ့ အမြတ်ကိုဘဲ တွက်နေတတ်တဲ့
စီးပွါးရေးသဘော တရားတွေကို မနှစ်မမြို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့နည်းဗျူဟာတွေကို သိတဲ့လူကလုပ်တယ်။
စီးပွါးပျက်ကပ်လဲဆိုက်ရော(ဒါမှမဟုတ်) အမှန်တရားလည်း ဦးနဲနဲမော့လာရော
ဆက်တိုက်ကြီးမြတ်နေဘို့? နိုးပါ ။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး (Law of Diminishing Marginal Returns )
ဆိုတာရှိတယ်။လျှော့နည်းသွားအထွက်ဥပဒေသတဲ့ မြန်မာလို အနိစ္စ တရားဆိုတာနဲ့ သိပ်တူတာ။
ကိုနိုဇိုးမိ မှိုစိုက်တယ်။ ခူးတာရော ဈေးသွားရောင်းတာရော တယောက်ထဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုပါစို့။
အဲ ..၂ယောက်ဆိုရင် ပိုရောင်းလို့ရလာမယ်။ နောက်ဈေးတခုသွားရောင်းလို့။
အဲ…..၃ ယောက်ဖြစ်သွားပြီ ဆိုပါစို့။ မှိုမှမရှိတာ ၃ယောက်စာ ရောင်းဘို့။
လူ “တိုး” တိုင်းရောင်းရတာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒီတော့ ၂ယောက်က အမြင့်ဆုံးအမြတ်ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီနောက်ပိုင်း မှိုထပ်စိုက်၊ထပ်လူတိုး လုပ်ကြည့်လေ။ ပြန်ရောက်သွားအုန်းမှာဘဲ။အဲဒီနေရာကို။
နည်းပညာခေတ်အစ အဲဒီဟာကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး အော်ခဲ့တဲ့လူတွေ ခုငြိမ်သွားပြီ။ပြန်ကျနေပြီလေ။
နည်းပညာအသစ်ထွက်၊ပစ္စည်းအသစ်ထွက်တိုင်း ဘယ်မှာလည်း ဝယ်မဲ့သူ.။
အော် …ပိုက်ဆံလား။အေးရော့ ..ယူယူ(ခရက်ဒစ်ကာဒ်=အကြွေးဝယ်ကာဒ်တွေ) ၊
မြတ်ပါတယ် အွန်ပေပါ။ ငွေစင်ကမရှိတော့ လေထိုး လေရော်။ နိုင်ငံအချင်း၊ လုပ်ငန်းအချင်းချင်း
(ကိုကြောင် အဲဒါရေးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်။ ကြုံလို့ပါသွားတာ။ M ၁၊၂၊၃၊၄ တွေကိုရှင်းမှ ပိုကောင်းတာ
အဲဒီတော့ ချမ်းသာတဲ့လူက အမြတ်အမြတ်နဲ့ အလုပ်သမားလဲလုပ်ခကောင်းကောင်းမပေးချင်၊
ကွာဟကုန်တယ်။ Middle Class လူလတ်တန်းစားမှာတောင် Upper အပေါ်နဲ့
အဲဒီလူမှုဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ တလောက ဆီမီနာတခုသွားပြောဖြစ်တယ်။
အချက်အလက်ဆိုလို့ ကျနော်က ၂၀၁၀ တနှစ်ထဲ၊၂၀၀၉ တနှစ်ထဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လေ့မရှိဘူး။
(Time Series)၁၀နှစ် အနှစ် ၂၀ နီးပါးဒေတာမျိုး၊အချက်အလက်မျိုးနဲ့ ညှိပြီးမှ ပြောရင်ပိုကောင်းတာမို့
ကမ္ဘာလူဦးရေကို 20% စီ ခွဲရင်တဲ့ အချမ်းသာဆုံး 20% က အဆပေါင်း ၁၅၀ ချမ်းသာကြောင်းပါတဲ့။
အဲဒီတော့ဗျာ အချမ်းသာဆုံး 20% ကအသား၊ငါး 60% နီးပါးသူတို့အုပ်သတဲ့။(ကျန်တဲ့ 80%ကကျန်တာစား)
အဲဒီတော့ တနေ့ ဝင်ငွေ US2Dollar အောက် ရ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေငတ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပြီ။
အဲဒီဟာကို Values of development (လူသား)ဖွံ့ဖြိုးမှုတန်ဖိုးများဆိုပြီး မှတ်သားဘူးတယ်။
ထမင်းစားဖို့လိုတာပေါ့။အဝတ်အစားရောလိုတယ်။ ကိုဘလက်ရေးတဲ့ “အိမ်” လေးလိုတယ်။
အပေါ်က (Food, Clothing and Shelter)သုံးချက်။အဓိက ကတော့ကိုယ်ဟာကိုလုပ်ရမှာပါ။
ဆိုတော့ ပြောခဲ့သလို မညီမျှတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကိုယ်က (Green Lable) သောက်နေတယ်။
ဟို..ဆိုမာလီယာကလူတွေ ရေသောက်စရာမရှိလို့ နွားဖင်နားမှာ တန်းစီပြီး နွားသေးပေါက်တာကိုစောင့်နေတယ်။
ပြောဘူးတယ်နော်၊ ကလက်ရ်ှနီကော့ဗ်(အေကေ ၄၇) ရိုင်ဖယ် ကျည်တစ်ထောင့်ဟာ အာဖရိက
ကအိမ်ထောင်တစုအတွက် ခြင်ထောင်တလုံးကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်တယ်၊ အဲဒီခြင်ထောင်တလုံးက
အနည်းဆုံးတော့ ကလေး ၂ယောက် ,၃ယောက် သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့သေမှာကို ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ။
(#) အခြေခံလိုအပ်ချက် (Food, Clothing and Shelter)တွေလည်း လိုတယ်။
ဂလိုဘယ် လိုက်ဇေးရှင်းကို အမှီမလိုက်နိုင်သူများ နစ်မြုပ်ကုန်တယ်လို့ပြောဘူးပါတယ်။။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာလူဦးရေ20% လောက်ဟာ ကွန်ပြူတာမသိဘူး၊ကားမစီးဖူးဘူးတဲ့။
(Survival of the fittest =တော်သူကျန်တဲ့ခေတ်)လို့ပြောဘူးခဲ့တယ်။
ခုမဟုတ်တော့ဘူး။ တော်လည်း အခွင့်အရေးကို ယူနိုင်တဲ့ “လူလည်” မဟုတ်ရင် ကျန်ခဲ့တဲ့ခေတ်။
တော်တာထက် လူရည်လည်ပြီး အခွင့်အရေးယူတတ်ဘို့ ပိုအရေးကြီးသွားပြီ။
ဆိုးတာက အဲဒီမှာ အဲဒီ လူလည်ဆိုတဲ့ (Opportunist= အခွင့်အရေးသမား)တွေဆိုတာ
အများစု ကကိုယ်ကောင်းစားရေးဘဲ။ မျှမျှတတ မစဉ်းစားတတ်ဘူး.။တကိုယ်ကောင်းသမားက
အများစု ဖြစ်နေလို့ ဒီ ရလာဒ် ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။
ကဲ ဗျာ။ဒါဆိုရင် ဘာလုပ်လို့ရမလဲ?
ပြီးတော့ လူမှုဘဝများကို “မျှဝေ” ပါလို့ သံချောင်းခေါက်ပါ၏ပေါ့ဗျာ။
တခုတော့ ပြောလိုက်မယ်နော်။ ခင်ဗျားထမင်းဝဘို့၊ခါးလှဘို့၊အမိုးအကာလေးအောက်နေဘို့
တာဝန်ရှိတာ “ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်” လို့။
ဟိုဟိုဒီဒီ လက်ညိုးထိုးနေရင်းငတ်နေမှာစိုးလို့ဗျာ ။
~~~~~လက်ညိုးတွေညွန်ကာလေ~~~~~ကဲ့ရဲ့တာ~~~ ကိုယ့်ကိုလိုဘဲ ~~ထင်ယောင်နေလား၊
စစ်မှန်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရမယ်ဗျ။ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ လူတယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေရမယ်ဗျ။
ဒီထက်ပြောရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားရမယ်။ ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားရမယ်။
ကိုယ့်ဘဝကိုယ်အထူးဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ အင်းဂျီဘရဲန်းဒဒ်လေးဝယ်လာရင်တော့ ဂရုစိုက်လိုက်တာ။
ကိုယ်ဟာကိုယ်ကျ “လေ”နေမယ်ဆိုရင် အဲဒါ လွဲနေပြီပေါ့ဗျာ။၊
နောက်တခုကသူတပါးကို အသိအမှတ်ပြူပေးတတ်ရတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ရတယ်တဲ့။အဲဒီဟာကတော့
အဲဒီမှာ ခုနက လူမျိုးတွေကြောင့် ကွာဟချက်ရှိမယ်ပေါ့ဗျာ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးရှိအောင် နေမယ်ပေါ့ဗျာ။
တန်ဖိုးဆိုလို့ဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ရဲ့ တန်ဖိုး သုံးမျိုး ကိုသွားသတိယတယ်ဗျ။
ဆရာက တန်ဖိုး ၃ မျိုးရှိတယ်တဲ့။
(အဲဒီ စိန်ဝတ်ပြီး ကြွားလိုက်တာ “ဟိုကောင်မ မျက်တောင်မခပ်ဘူးတော့” ဆိုတာမျိုး)
(မဒမ်ဘလက်ချော Says : အဲဒီ စိန်က ကျမရဲ့အမျိုးသား ကိုဘလက်ချော မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားတာ
ဆိုတာမျိုး၊ စိန်ချင်း တန်ဖိုးချင်းတူရင်တောင်မလဲနိုင်ပါဘူး)
(#1) လူဆိုတော့ ပကတိတန်ဖိုးလဲ ရှိသင့်တယ်။
(#2) အသုံးကျအောင်နေတတ်ရင်အသုံးကျတယ်။ မိသားစုရေးရာဝန်ကြီးဆိုတာ
(#3) ခင်တယ်၊မင်တယ်၊သူငယ်ချင်းချင်း သူရှိကိုယ်စား၊ ကိုယ့်ရှိဖွက်ထား(^^)။
ခံစားပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပြီ။၊ဟာ မတွေ့တာကြာပြီ။ အမွှာပူးမွေးတာလားဟင်။ခင်တာ။ သံယောဇဉ်။ (ဘယ်သူ့
သူကြီး ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ပြောနေတယ်။ သူကြီး မန်းဂေဇက်ပိတ်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
အဲဒါ ဘာတန်ဖိုးလဲ? (Right Answer=10 မှတ်)။
အဲဒီ တန်ဖိုးထားတဲ့အလေ့အထလေးတွေရှိလာရင် လူမှုဘဝ ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးမယ်ပေါ့။
လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာကိုငါကသခင်ဘသောင်းကွ ကျွန်ဘသောင်းမဟုတ်ဘူး၊ မထိုးဘူး။ အလုပ်ထွက်တယ်တဲ့။
ဂျပန်မှာ ပရက်ရှာအနည်းဆုံးအလုပ်ကိုရှာလုပ်ထားတာ။တလောက ဋ္ဌာနအသစ်၊ဘာသာ
အသစ်တခု စ သင်ဘို့လုပ်တော့၊ဌာနမှူးဆရာ (အလွန်သဘောကောင်းသော ဂျပန်တောသား) က
ကျောင်းသားတွေကိုစိတ်မဆိုးဖို့၊သီးခံဖို့ ပြောတယ်။ ဪ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေလို့။
လူဟာလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဘာလဲလို့ မေးရင် “ရွေးချယ်နိုင်တာ”။
မန်းဂေဇတ်မှာ ဘာရေးရေး မရတော့ပါ၊ အယ်ဒီတာစစ်တော့မယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်မှုနည်းသွားမယ်။အဲဒီလိုမျိုး။
အဲဒီတော့ ရွေးချယ်နိုင်လေလေ စိတ်ချမ်းသာမှု၊ကိုတိုးလေလေပေါ့နော်။
လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆို ဟောပြောခွင့်တွေဆိုတာအဲဒီမှာ ပါလာပြီပေါ့။
Sir အာသာလူးဝစ်ဆိုတဲ့ စီးပွါးရေးပညာရှင်ပြောတာက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာ
ငွေချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘဲ ရွေးချယ်နိုင်တာတွေတိုးပြီး ဘဝကိုကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ဖြတ်သန်းနိုင်တာမျိုးတဲ့။
သို့မဟုတ် ကိုယ့်ရွေးချယ်နိုင်မှုကို “တိုးတက်အောင်”လုပ်ဖို့
ဆိုတဲ့အချက် ၃ ချက်ကိုတဦးချင်း၊ တမိသားစုချင်း၊ တရပ်ကွက်ချင်း၊ တမြို့ချင်း၊တနိုင်ငံချင်းပေါ့ဗျာ
“ငွေရှာပါ၊ခင်ဗျားတယောက်ထဲ အတွက်တော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့” လို့။
အပေါ်ကအချက် ၃ ချက်လုပ်နိုင်ဘို့ Pillar=ပီလာ ၅ ချောင်းလိုပါတယ်။ နောက်မှဆက်ရှင်းပါအုန်းမယ်။)
လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဘာလဲလို့ မေးရင် “ရွေးချယ်နိုင်တာ”။
အဲဒါလေးကို သေသေချာချာ မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်…။
ကိုသစ်မင်းပို့ စ်ကို ဖတ်အပြီး
မောင်ပေ နဲ့ မောင်ပေ့ဆရာ ရဲ့ အင်တာဗျူး ကို နဲနဲပြောချင်ပါတယ် ။
မောင်ပေ့ ဆရာ ဟာ အသက်၆၀ကျော်ပြီ ဖြစ်ပြီး ၊ အခြားစီးပွားမလုပ်တော့ဘဲ သူတတ်ထားသမျှ ပညာများကို တပည့်များကို ပြန်ဝေမျှရင်းနဲ့ ပရဟိတတွေ အများကြီး ၊ ဦးဆောင်လုပ်နေသူ တစ်ဦးပါ ။
သူ က သူ့ တပည့်များ ကို သင်တန်းမဆင်းခင် တစ်ရက်မှာ အင်တာဗျူးပါတယ် ။
“ မင်း တစ်ကယ်လို့ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့ရင် ၊ အရမ်းချမ်းသာသွားခဲ့ရင် ၊ မင်းဘာလုပ်မလဲ ” တဲ့ 
တစ်ကယ်လဲ သူ သင်ပေးတဲ့ ပညာကို အခြေခံပြီး ကိုယ့်ဥာဏ် ကိုယ့်ကံ နဲ့ သူဌေးသေချာပေါက် ဖြစ်နိုင်တာမို့ ပါ ။
မောင်ပေ ဖြေခဲ့တဲ့ အဖြေ ကတော့ “ ဆရာ ၊ ကျုပ်သာ အမြန်ဆုံး အောင်မြင် ချမ်းသာပါစေ ၊ အလှူအတန်းနဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ ထက်သန်စွာ ပါဝင်ပါ့မယ် ” လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ် ကစ်သိုရေ
ကစ်သို ပို့ စ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ
သို့ပေမယ့် အဆိုးဆုံးစံနှုန်းမှာတော့ ကိုယ်မရှိသေးပါလား
ဆြာသစ်ကတော့ တပုဒ်ဆို ဆိုသလောက် အနှစ်တွေချည်းဘဲ ရေးနိုင်လို့
လေ့လာစရာ သင်ယူစရာ အစတွေ ဆွဲထုတ်ပြီး ..သင်ယူလေ့လာနေလို့
များများ မမန့်နိုင်တာ မဆွေးနွေးဖြစ်တာ ..နားလည်သည်းခံပေးပါခင်ဗျား..
ဟုတ်တယ်နော်။ ဒီဝါကျတစ်ကြောင်းနဲ့တင်ပဲ ငါ့ဖို့၊ ငါစွဲ သတိချပ်လာနှိုင်တယ် ဆရာသစ်ရေ။
(#3)ခံစားမှုတန်ဖိုး …… ဒီ Sentimental Value တော့ တီချာ Favourite ပါပဲ။
ပြောသွားတဲ့လူက တကဲ့ အီကော်နော်မစ်ရဲ့ ဂေါ့ဒ်ဖားသားကြီးဗျ။ ငွေအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့
လူမှုဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အစပထမက ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်ရမှာမဟုတ်လား။
နောက်ပိုင်းရေးတဲ့အထဲမှာ ခင်ဗျားတယောက်ထဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလာရမှာမို့ အားမငယ်ပါနဲ့လို့။
ပီလာ ၅ ခုမသွားခင် အပေါက်မတဲ့တာ တခုရေးအုန်းမယ်နော့။
အဲဒါရေးမှ ပိုပီပြင်မှာမလို။ ၃ ပုဒ်ဆက်တိုက်ရေးမယ်ကွာ။
Sentimental Lovers ဆိုတဲ့ ဂျပန်သီချင်းလေးရှိတယ်ဗျ။
တော်တော်ကောင်းတယ်။ နဂိုထဲမှအချစ်,ချစ်သူ ပါဟဲ့ဆိုကာမှ (^^)။
မာ့စ်လော ကြီးရဲ့ ဟိုင်ရခီ ကြီး ပဲပြေးမြင်နေတော့တယ် ဆြာသစ်ရေ့…
အဲ့ ဟိုင်ရခီး ကြီး ကြည့်ကြည့်ပီး ဘယ်အဆင့် ကို ဘာရောင်းမယ် ဆိုတာလောက်ပဲ
ခပ်တိမ်တိမ် အားတိုင်း တွေးနေမိတဲ့ကောင် ဆိုတော့ …
အသစ်ရေးလာမည် များကို စောင့် ရင်း လက်ရှိ ပိုစ့်ကို အထပ်ထပ်ဖတ်နေပါသည်
Pillarကို.. ထောက်တိုင်လို့ ခေါ်မလား..။
တိမ်မယောင်နဲ့ နက် တဲ့
ဆြာသစ်ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ဖတ်ရှု့မှတ်သားပြီး ….
Pillar=ပီလာ ၅ ချောင်း ကို စောင့်မျှော်နေကြောင်းပါ ….
ဟုတ်ကဲ့ ဆက်ရှင်းမှာပါ။ သူကြီး မင်း နဲ့ မမခင်ဗျား။
ပီလာအောက်မှာ ခံစရာ အမာခံလည်း လိုသေးတာဆိုတော့အဲဒါလေးများ မန့်မလားကြည့်နေတာ
ဖတ်ရတာ လေးနက်လွန်းလို့ ရင်ထဲတောင် လေးသွားပါတယ် ….
နောက်အပိုင်းတွေကို ဆက်လက်မှတ်သားဖို့ စောင့်ဖတ်ပါ့မယ် …
ကိုသစ်ကြီးရေ၊ကောင်းလွန်းတဲ့ ဖီလော်ဆိုဖီလေး မို့ ကူးထားပါတယ်၊
ကျနော့် ၀န်ထမ်းတွေကို ဒါမျိုးလေးတွေဆို အမြဲပြန်ဖြန့်ဝေပါတယ်၊
လူအတော်များများက သီအိုရီတွေကို သိသလိုလိုတော့ရှိပါရဲ့။
သူကိုယ်တိုင်က မလိုက်နာတော့ ပြောအလကားဖြစ်ကုန်ပြန်ရော။
ကျနော် စိတ်ထဲရှိသလိုကို သိထားတာလေးနဲ့ ပေါင်းရေးလိုက်တာပါ။
ရေးစမ်းပါအုန်း၊ ခင်ဗျားလဲ အချို ဆိုတာ သိပါတယ်ဗျာ။
ပြောတယ် သိတယ် ဆိုပေမဲ့ လက်တွေ့မလုပ်နိုင်သူများ က အများကြီးပါဘဲ။
အဲ နဲနဲ လုပ်နိုင်တာနဲ့ နဲနဲ အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိရင် လုပ်လာကြမှာပါ။
ဒီပို့စ်ကို မဒမ်ဘလက်ချော မဖတ်မိပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းရတော့မှာပဲဗျို့။
တော်ကြာ တန်ဘိုးထားချင်လွန်းလို့ မွေးနေ့လက်ဆောင် ၀ယ်ခိုင်းနေမှဖြင့် ….။
လေးလေးစားစား စောင့်ဖတ်လေ့လာပါမည် ခင်ဗျား။
ဆြာသစ် ရေးပြီးသလောက်ထိကိုပဲ ဆွေးနွေးမယ်နော်၊ နောက်တင်မယ့် pita နံပြားငါးပြားကိုလည်း စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်။
(၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုး ၃မျိုးရှိအောင်နေဖို့
(၃) အမှီအခို အတတ်နိုင်ဆုံးကင်းဖို့
အထက်ပါ သုံးချက်မှာ ဘယ်အချက်နဲ့ စကြမလဲ။ အားလုံးပြိုင်တူ စဖို့ဆိုတာတော့ ခါချဉ်ကောင် တောင်ဖြိုမဲ့ အကြံဖြစ်နေမှာ စိုးပါတယ်။ တခုနဲ့တခု သီးခြားဖြစ်နေသလား ဆိုတော့လည်း ယနေ့ ကမ္ဘာရွာစနစ်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တခုပဲ ပြည့်စုံပြီး ကျန်အချက်မှာ မလိုက်နိုင်ရင်လည်း အလကားပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံလို ဆင်းရဲပြီး မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံလေးများအဖို့ သာ၍ဆိုးပါတယ်။ ဘယ်အချက် ဦးဆောင်သင့်သလဲ သတ္ထုချကြည့်ရင်…..
(၁) စားဝတ်နေရေး ပြည့်စုံမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးရှိလာပြီး လွတ်လပ်တဲ့ဘဝရောက်မလား ။ (စီးပွားရေး ပြုပြင်မှုများ အရင်လုပ်ပြီးမှ နိုင်ငံရေးစနစ်ပြင်ဆိုတဲ့ စစ်တပ်လိုလားသူများ အတွေးအခေါ်နဲ့ စပ်ဆက်တွေးနိုင်မယ်ထင်တယ်)
(၂) ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်တင်ပြီးမှ စီးပွားရေးလုပ်လို့ဖြစ်မယ်၊ ဒါမှ လွတ်လပ်သူဖြစ်မယ်။ (နိုင်ငံရေးစနစ် အရင်ပြင်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်များ အမြင်)
(၃) အာဏာရှင်စနစ် ဖြုတ်ချ ပြည်သူ့အစိုးရထူထောင်မယ်။ (လက်ဝဲအစွန်းဝါဒီများအမြင်) သို့မဟုတ် တသွေးတသံတမိန့် စနစ်တည်ဆောက်မယ်။ (လက်ယာစွန်း အမျိုးသားရေးဝါဒီ)
ဆိုပြီး သုံးမျိုးထွက်လာတယ်။ ဒီသုံးချက်ကလည်း ခေတ်အပေါ်မူတည်ပြီး ပြိုင်တဲ့အခါပြိုင်၊ နိုင်တဲ့အခါ နိုင်လိုက်ပါ။ အမြဲတည် မနေပါဘူး။
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အနေအထားအရကတော့ အထက်ပါ သုံးချက်စလုံး အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါဘူး။ သုံးချက်စလုံး ပေါင်းလုပ်ရင် ပိုမဖြစ်နိုင်တာ သေချာပါတယ်။
ဒီနေရာမှ တွက်ရမှာ မိမိအပြင် မိတ်ဆွေ၊ ရန်သူ၊ တစိမ်း စတဲ့ ပြင်ပအချက်များကိုပါ ထည့်တွက်ဖို့ပါ။ တကိုယ်တည်း ပြေးတယ်လို့ ယူဆမယ်ဆိုရင် လိုရာပန်းတိုင်းကို မိမိခန့်မှန်းတဲ့အတိုင်း ရောက်မှာ အသေအချာဖြစ်ပေမဲ့ ပြေးလမ်းကြောင်းမှာ လူပေါင်းစုံရှိလာတဲ့အခါ ထင်သလိုမဖြစ်တာ အထင်အရှားပါ။ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးကို ပေးထားတဲ့ သုံးချက်နဲ့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ယနေ့ပြည်တွင်း ပြည်ပ အနေအထားများနဲ့ တချက်ချက်ကို ချိန်ကိုက် ဇောင်းပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အထက်ပါ သုံးချက်စလုံး သူ့နည်းသူဟန်နဲ့သူ အောင်မြင်မှု ရခဲ့တယ်၊ ကျဆုံးသွားတာ အချိန်အခါကို မသိလို့ သို့မဟုတ် မလိုက်နိုင်လို့ သို့မဟုတ် တဖက်ပြိုင်ဖက်ကို မဟန့်တားနိုင်လို့ ဖြစ်ရတယ်။ သမိုင်းဆိုတာ ရဟတ်ဘီးလို လည်ပတ်နေတာမို့ သူ့အချိန်သူ့အခါ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေကို ကြည့်ရင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများ အထက်ပါသုံးချက်ထဲက တနည်းမဟုတ်တနည်း ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ကောင်းတော့ သူများမကောင်း၊ သူများကောင်းတော့ ကိုယ်မကောင်း၊ ပြည်တွင်းညီပြန်တော့ ပြင်ပက အခြေအနေမပေး၊ ပြင်ပကလိုလားနေပြန်တော့ ပြည်တွင်းက မလိုက်နိုင် အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်ရပါတယ်။ (မြန်မာတနိုင်ငံထဲ မဟုတ်ဘဲ ဆင်းရဲ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်များအားလုံး ဒီသဘောမျိုး ရှိမှာပါ)။ သာမာန်အားဖြင့် အူမ တောင့်မှ သီလစောင့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း သီလစောင့်ကြမှ (ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို ဆိုလိုပါသည်) အူမတောင့်နိုင်တယ်။
အခုဆိုရင် ပြည်ပအကူအညီ အထောက်အပံ့ အရင်းအနှီးများ ဝင်လာတော့မှာမို့ ယခင်က ပိတ်နေတဲ့ အရာတခု ပွင့်လာပြီ။ ပြည်တွင်းမှာရော အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ နိုင်ငံရေးစနစ် ပွင့်လင်းရမယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရမယ်၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိရမယ်။ ဒါတွေရှိမှ ပွင့်လာတဲ့ ပြည်ပအကူအညီများ ပိတ်မသွားမှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းအင်အားနဲ့အတူ ဆြာသစ်ပြောတဲ့ အချက်သုံးချက် ဖြည့်ဆည်းဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါမယ်။။။။
အကို့ ပို့စ်ဖတ်ပြီး တွေးမိတာက ကိုယ့်ကို ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှု က အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့….
အဲဒါသာ ပြည့်စုံနေရင် နံပါတ် ၁ က အလိုလို ကပ်လာမှာပဲနော်..
ပြီးတော့ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ စံအောက်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ နေမှတော့ အမှီအခိုကင်းပြီး ငြိစရာမရှိ လွတ်လပ်ပြီးသားဖြစ်မှာပဲ..
(ဆိုပါစို့ သဂျီးက ပို့စ်တွေ စိစစ်လဲ နဂိုထဲ ကတန်ဖိုး မမဲ့အောင်ရေးတတ်ရင် ပူစရာ မလို ..ဂလိုမျိုးထင်တယ်)
အကိုအပါအ၀င် ရွာသူားတွေရဲ့ စေတနာ ပါသော အရေးအသားတွေကို ဖတ်မှတ်ခွင့်ရနေလို့ ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါဗျာ..
ဆရာသစ်ရဲ့ပို့စ်တွေက အေးအေးဆေးဆေးဖတ်မှ အဆင်ပြေလို့
Prof; Dr. Thit က economist မှန်းသေချာသွားပြီ။
လူဆိုးပဲ အနော့်ကို ဘဏ်အကြောင်းငွေအကြောင်းလာရေးခိုင်းတယ်။ ရှက်ထှာ။
Economics ကို ကြက်တူရွေးလောက်ပဲတတ်တာကို။
စမစ်ဆိုရင် ဒေါ်မန်စမစ်ပဲသိတယ်။ ကိန်း ဆိုရင်တော့ မောင်ကိန်းရွှေဆိုင်ပေါ့။
စကော်လာ မှာ “ရာဇာ” ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်။
ကိုလင်းဝေကျော် ဆိုတာလည်းကျနော်လေးစားရတဲ့ စကော်လာ တယောက်ပါဗျာ။
ဘယ်သူက ဘာတွေလည်း ပြောဂျအုမ်းလေဗျာ… ဦးပါလေရာကလဲ ဦးဖက်တီးကို ရဲတဲ့၊ မေပေါင်က ဦးဘလက်ကို ထောက်လှမ်းရေးတဲ့၊ အခု ဆြာသစ်က ကိုလင်းဝေ (လင်းဝေကျော်ထင်တယ်နော်၊ နာမည်ခဏခဏ မပြောင်းပါနဲ့ဗျာ၊ ကျုပ်တို့ စီအိုင်အေ ဒေတာဘေ့စ်မှာ နာမည်တွေထပ်နေရင် မကောင်းဘူး) ကို ပညာရှင်တဲ့။ ဘာတွေလဲ ဘာတွေလဲ။ ကြောင်ကြီးကတော့ တရုတ်မကြိုက်သူ (တွေးချင်သလိုတွေး)
အဲ့ဒါလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ ။ ရှယ်ခွင့်ပြုပါ သူငယ်ချင်းကိုပို့ချင်လို့ ။
တကယ်တော့ ငါ့အတွေးက အဲဒီထက်မပိုသေးပါလား…..
ကိုပေဆို အစိမ်းတဆင်စာ၊အနီတဆင်စာ ကိုဘလက် အဝယ်ကိုစောင့်နေတယ်။
အဲဒါ လူ့ “လိုအပ်ချက်” ၃ မျိုးဆိုတဲ့ သဘောဆောင်တဲ့ အရာတွေ
“Stage” အနေနဲ့ ဆွေးနွေးသွားတဲ့ ကိုကြောင်အမြင်ကို ကြိုက်တယ်ဗျ။
External/ Internal Factors =ပြင်ပ အတွင်း အရင်းခံအကြောင်း များကိုပါဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့
ဒီကော်မန့်ကကျနော်ရဲ့ နောက်ရေးမဲ့ စာရဲ့ အရိပ်ပြ ရှင်းတမ်းလေးလိုပါဘဲ။
အိုကေ ကိုကြောင်ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆက်ဆွဲရအောင်နော်။
ကလည်း စာချင်းမတူပေမဲ့ ” Stage” ကိုဘဲပြောတာမို့ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးပါတယ်ညီရေ့။
ဟုတ်ကဲ့ ဖတ်ပါ။နားမလည်ရင်မေးပါ၊ သဘောမတူရင်ငြင်းပါ။
အဲဒီလိုသိတဲ့လူဆိုရင် ” Turning Point”ရှိတယ်ဗျ။
“ငွေရှာပါ၊ခင်ဗျားတယောက်ထဲ အတွက်တော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့”
တစ်ယောက်ထဲ အတွက်တော့ မရှာပါဘူး။ ရတဲ့ဝင်ငွေကို ဆယ်ပုံ ပုံတယ်။ တစ်ပုံကို အများအတွက် လှူတယ်။ သုံးပုံကို စုတယ်။ ၅ပုံကို သုံးတယ်။ ၅ ပုံသုံးတာတောင် သိပ်မလောက်ချင်ဘူး
လူမှာ လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဘာလဲလို့ မေးရင် “ရွေးချယ်နိုင်တာ”။
… သင်ခဲ့ရဖူးတယ် Ethical & Unethical နဲ့တွဲနေတယ် Business Communication ဘာသာရပ်မှာလို့ ထင်တယ် …
ကိုသစ်ရေ…ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် အဓိကလို အပ်နေတာကတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေများများ လိုအပ်နေပါတယ်၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတွေကိုလည်း တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်၊တန်ဖိုးကို သိမှလည်းတန်ဖိုးထားတတ်မှာပါ…တန်ဖိုးကို သိပီး အသုံးချနိုင်ရင် တန်ဖိုးပိုရှိလာမှာ…ပြည်တန် ပတ္တာမြားကို စောင်စုတ်နဲ့ထုတ်ပြီး သူတောင်းစားဂေါင်းပေါ် တင်ထားရင် ဘယ်သူကမှ တန်ဖိုးရှိမှန်းမသိနိုင်ပါဘူး…
ဒါကြောင့်တန်ဖိုးကိုသိပြီး အသုံးချနိုင်မှသာလျှင် အဖိုးတန်သော ထိုက်တန်သော တိုင်းပြည်ဖြစ်လာမှာပါ။